ကြော်ငြာလက်ခံ ပြီး မှ ရူတင်ကို ရောက်မလာတဲ့ ဖွေးဖွေးကို ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင်က တရားဥပဒေနှင့်အညီအရေးယူမည်..... - Myanmarload
ကြော်ငြာလက်ခံ ပြီး မှ ရူတင်ကို ရောက်မလာတဲ့ ဖွေးဖွေးကို ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင်က တရားဥပဒေနှင့်အညီအရေးယူမည်.....
လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ် က 15:20 September 12, 2016
သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးဟာ ယခုထိ ပရိသတ်တွေကြားမှာ နာမည်ပျက်မရှိဘဲ ကျော်ကြားနေတဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ပါ။ သို့သော်လည်း.....
သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးက ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင် တို့နှင့် အတူ ကြော်ငြာရိုက်ရန်သဘောတူပြီး ဖွင့်ပွဲ အခန်းအနားကို လာရောက်မည် ပြောကာ စရံငွေ သိန်း ၂၀ ယူပြီးမှ ယနေ့ Miniso စတိုးဆိုင် ဖွင့်ပွဲ နှင့် ကြော်ငြာရိုက်ကူးရေးကို မရောက်လာသဖြင့် ဖုန်းဆက်ကြည့်ရာ အိပ်ရာထနောက်ကျ၍ ခဏစောင့်ပေးပါရန်ပြောကြားခဲ့ပြီး ယခုအချိန်ထိ မရောက်လာသေးပါဟု ဒါရိုက်တာစသ်ရော်မောင်မောင်က သူ၏ ဖေ့ဘွတ်အကောင့်တွင်တင်ပြီး သက်သေများနှင့်တကွယခုလိုရေးခဲ့ပါသည်။
'စင်ရော်ကြော်ငြာလုပ်ငန်းမှ ယနေ့ (12-9-2016) ရက်နေ့တွင် Miniso စတိုးဆိုင်ကြော်ငြာ ရိုက်ကူးရေးနှင့် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ သရုပ်ဆောင် ဖွေးဖွေးအား ( 1 -9 -2016 ) ရက်နေ့တွင် ကမ်းလှမ်းခဲ့ရာ သရုပ်ဆောင် ဖွေးဖွေးမှ အနုပညာကြေး ကျပ် (45) သိန်းဖြင့် သဘောတူခဲ့ပါသည်။ (9-9-2016) ရက်နေ့တွင် သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေး လက်ဝယ်သို့ စရံငွေ ကျပ် (20)သိန်း အား ပေးချေခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးသို့ ရိုက်ကူးခွင့် လျှောက်ထားခဲ့ပါသည်။
(12-9-2016) ရက်နေ့ရိုက်ကူးသည့်နေ့ရက်တွင် ဝတ်ဆင်ရမည့် ဝတ်စုံနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ပူးတွဲပါ ပုံများဖြင့်လည်း ဆက်သွယ်ပြီးစီးထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့နံနက် (8)နာရီဆိုင်ဖွင့်ပွဲသို့ Miniso ဆိုင်ပိုင်ရှင်နှင့်တကွ ဖိတ်ကြားထားသော နိုင်ငံခြားသားများ ၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂွိုလ်များ ဖွင့်ပွဲဖွင့်လှစ်ရန်အတွက် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်း သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးမှ “ ကျွန်မ အခုမှ အိပ်ယာမှနိုးကြောင်း ၊ ၁ဝနာရီ ၁ဝနာရီခွဲ ခန့်မှ ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း” အကြောင်းကြားလာသဖြင့် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား အချိန်နောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။
နံနက် (10)နာရီခွဲတိုင်အောင် ရောက်ရှိလာခြင်းမရှိသဖြင့် ဒါရိုက်တာ၊ ကင်မရာမင်း သုံးပေါင်၊ still ကင်မရာ ကိုနိုင်တို့မှ စောင့်ဆိုင်းလျှက် ရှိနေပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် စတေကင်မရာ ကိုနိုင်အား ဖွေးဖွေးမှ ယခုကြော်ငြာအား မရိုက်ဖြစ်တော့ကြောင်း အကြောင်းကြားလာပါသည်။ ဖွေးဖွေး၏ ဖုန်းများဖြစ်သည့် 09-5044125 ၊ 09-36363680 ၊ 09-785044123၊ ဖုန်းများအား ဆက်သွယ်သော်လည်း ဒုတိယအလုံးသာ စက်ဖွင့်ထားပြီး ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိတော့ပါ။ ကြော်ငြာရိုက်ကူးရန်အတွက် Red ကင်မရာငှားခ (8)သိန်း၊ lighting မီးးငှားခ (8)သိန်း ၊ ကင်မရာမင်းငှားခ ၊ စက်အဖွဲ့အင်အား (20) အား တစ်ဦးလျှင် (2)သောင်းနှုန်းဖြင့် ငှားရမ်းခ၊ ရှုတင်ကားငှားရမ်းခ ၊ ကျွေးမွေးစရိတ် စသဖြင့် ငွေကြေး အမြောက်အမြား အသုံးပြုခဲ့ရပါသည်။ နံနက် (၇)နာရီကတည်းကပင် ဒါရိုက်တာအပါအဝင် ရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့ဝင်အားလုံး ရိုက်ကွင်းနေရာသို့ ရောက်ရှိနေရာယူထားခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ရှုတင်မှာ ပျက်လုနီးပါးအခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေပါကြောင်းနှင့် အကယ်၍များ သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေး မရောက်ရှိလာပါက တရားဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း နှင့် ဖွေးဖွေးနေရာတွင် အစားထိုး ၇ိုက်ကူးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ချစ်စွာသော ပရိတ်သတ်များအား အသိပေးအပ်ပါသည်။
သက်သေများ ။ (1) Miniso စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်၊ Director of Photography သုံးပေါင်၊ Director of Still Photographer ကိုနိုင်'
ကယ် သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေး နာမည်ပျက်မှာ လား? ပြန်ပြီးတောင်းပန်မှာလား? တရားစွဲ ခံရမှာလား စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
အဲ့ဒါပြောပါတော့ နာမည်နှစ်လုံးနဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ကံထူးနေတယ်လို့။